LA OGAADAY: Dacwadii Uu Madax Waynaha Maamulka La Liga Ee Javier Tebas Uu UEFA Uu Gudbiyay Oo La Ogaaday Iyo Qorshaha Uu Doonayo In PSG Lagaga Saaro Champions Leaque-ga. – WWW.Gool24.net
LA OGAADAY: Dacwadii Uu Madax Waynaha Maamulka La Liga Ee Javier Tebas Uu UEFA Uu Gudbiyay Oo La Ogaaday Iyo Qorshaha Uu Doonayo In PSG Lagaga Saaro Champions Leaque-ga.
Madax waynaha maamulka horyaalka La Liga ee Javier Tebas ayaa hore u cadaystay dagaalka uu kula jiro kooxda ree France ee Paris Saint-Germain kadib markii ay Neymar Jr kula wareegtay lacagtii heshiiskiisa Barcelona lagu burburin karayay ee 222 milyan euroska ahayd, wuxuuna kooxda PSG ku eedeeyay in ay maal galin ku samaynayso lacagta dalka dawlada Qatar ay ka hesho taas oo uu aad uga cadhooday.
Haddaba wargayska France ka soo baxa ee L’Equipe ayaa maanta daabacay warbixin xaasaasi ah taas oo lagu shaaciyay waxyaabihii uu madax waynaha La Liga ee Javier Tebas dacwada ugu gudbiyay xidhidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA iyo qorshihiisa uu ku doonayo in PSG ayna ka tartami Champions Leaque inkasta oo uu sidoo kale hadalka raaciyay Man City.
Sida wargayska L’Equipe lagu daabacay madax waynaha La Liga ayaa markii uu UEFA u sharaxayay dacwadii uu bishii August ka gudbiyay PSG iyo Man City waxa uu yidhi: “Waxaynu arkaynay PSG iyo Manchester City oo maal galin ku samaynaya in ka badan kooxaha kale shantii sano ee ugu danbaysay”.
Wuxuuna Tebas oo hadalkiisa sii wata yidhi sida warbixinta L’Equipe lagu sheegay uu yidhi: “Dakhligooda dhabta ahi uma cudur daari karo maal galinta ay sameeyeen, sidaa daraadeed, waxay haystaan shirkado mala awaal ah oo la xidhiidha wadamo ay ka helaan xadi ka badan Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich ama Manchester United”.
Madax waynaha La Liga ee Tebas oo si cad hadalkiisa UEFA ugu sheegaya ayaa yidhi: “Dakhligu waxa uu si aan toos ahayn ama si toos ah uu ugu xidhan yahay dawlada Qatar isla markaana PSG waxay sii wadaa in ay khiyaano u samayso dhaqaale ahaan”.
Maamulka La Liga ee uu horkacayo Javier Tebas ayaa xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA u diray warbixin ka kooban 44 bog taas oo lagu sheegay sida kooxda ree France ay uga faa’iidaysanayso lacagta dawlada carbeed ee Qatar iyada oo lagu xusay in PSG ay sanadkii 2014 kii suuqa galisay 344 milyan euros taas oo aad uga badan lacagtii ay man United iyo Real Madrid suuqa galiyeen.
Man United ayaa markaas suuqa galisay 237 halka Real Madrid ay suuqa la gashay 224 milyan euros waa sida lagu xusay warbixinta La Liga ee UEFA loo diray ee uu maanta daabacay wargayska ree France ee L’Equipe.
Waxa kale oo waxyaabaha la soo qaaday ka mid ah in PSG ay xuquuqda baahinta TV-ga ka gasho lacag ka yar Real Madrid iyo Barcelona iyada oo kooxda PSG heshay 47 milyan euros halka kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ay ka heleen min 121 milyan euros taas oo ah waxyaabaha uu Tebas ka cadhaysan yahay in iyada oo PSG dakhli ahaan ka hoosaysa kooxaha uu maamulo ay haddana lacago kale ka faa’iidaysanayso.
Madax waynaha La Liga ayaa UEFA u qabtay in ay jawaab ka bixiyaan dacwadooda ilaa dhamaadka sanadkan iyaga o haddii kale dacwadooda gaadhsiin doona midowga Yurub ee EU wuxuuna yidhi: ” Waxaanu sugi doonaa ilaa dhamaadka sanadka si aanu u aragno waxa ay UEFA qabto. Haddii ayna waxba dhicin waxaanu u dacwoon doonaa EU sababtoo ah ma aha in ay tani sii socoto. Haddii aanu ogaano in ay danbiilayaal yihiin kama tartami doonaan Champions Leaque”.